साँच्चै चासो भएकाहरूलाई मात्र साहित्य दिनुहोस्
“तिमीहरूले सित्तैंमा पायौ, सित्तैंमा देओ” भनेर येशूले सिकाउनुभयो। (मत्ती १०:८) त्यसैले हामी मानिसहरूलाई बाइबल र बाइबल आधारित हाम्रा किताब अनि पत्रपत्रिका शुल्क नलिई दिन्छौं। (२को २:१७) तर एउटा कुरा हामीले मनमा राख्नुपर्छ। हाम्रा यी प्रकाशनहरू कुनै साधारण प्रकाशन होइन किनभने यसमा परमेश्वरको वचनको अमूल्य सत्य कुराहरू लेखिएका छन्‌। साथै यी साहित्यहरू छाप्न र विश्वभरिका मण्डलीहरूमा पठाउन धेरै नै खर्च र मेहनत लाग्छ। त्यसैले आफूलाई चाहिने जति मात्र लिनुपर्छ।
सार्वजनिक साक्षी कार्य गर्दा पनि साँच्चै पढ्‌न चाहनेहरूलाई मात्र साहित्य दिनुहोस्। (मत्ती ७:६) बाटोमा हिंड्‌नेहरू सबैलाई खुरुखुरु दिनुको साटो साँच्चै चासो छ कि छैन पक्का गर्न कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। मानिसहरूको चासो छ कि छैन पक्का गर्न तल पेटीमा दिइएका प्रश्नहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै चासो भएको व्यक्ति हो कि होइन भनेर पक्का गर्न सकिएन भने पर्चा मात्र दिन सक्छौं। तैपनि तिनले पत्रिका वा अरू कुनै प्रकाशन मागेमा खुसीसाथ दिन सक्छौं।—हितो ३:२७, २८
के उक्त व्यक्ति . . .
हाम्रो कुरा ध्यान दिएर सुन्छ?
हामीसित दोहोरो कुरा गर्छ?
साहित्य पढ्‌न इच्छुक छ?
अनुदान दिन चाहन्छ?
हाम्रो सन्देश सुन्न पाएकोमा खुसी छ?